SMF မှာ Shout Box ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ?? — MYSTERY ZILLION
SMF မှာ Shout Box ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ??
March 2009 edited June 2009 in Other
ကျွန်တော် သုံးတာ SMF 1.1. 8 ပါ ..အခု MZ မှာ ထည့်ထားသလိုမျိုး Shout Box ထည့်ချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က Portal မှာတော့ မဟုတ်ဘူး ..Forum အပေါ်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်နားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်တဲ့ နေရာလေးမှာ ထည့်ချင်တာပါ ..လမ်းညွန်သင်ပြပေးကြပါဦး ..:77::77::77:
Read me File လေးကို ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော် ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။
ကိုရဲမာန်ရေ ..ဆက်လက် ဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျာ ..ကျွန်တော် ဒေါင်းတော့ Read me ဖိုင်လဲ ပါမလာဘူး ...
မှာ သွားလိုက်ကြည့်တော့လဲ အဆင်မပြေလို့ ....
ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျာ ..:):)
ဘာမှ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Admin panel ထဲက Packages ထဲကို ၀င်။
Download Packages ကိုရွှေး။
အောက်ဆုံး UploadaPackage က Browse ကနေ shout box ကို zip, tgz, tar.gz ထဲက တစ်ခုခုနဲ့တင်။
ပြီးရင် Apply mod လုပ်။
Install Now ကိုရွှေး။
ပြီးရင်တော့ Shoutbox Admin ထဲကနေ မိမိစိတ်ကြိုက်၀င်ရောက်ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲပေါ့။
မြန်မာကီးဘုတ် ထည့်ပေးချင်ရင်လည်း သိပ်မခက်လောက်ပါဘူး။ thanks button အတွက်လည်း mod ရှိပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း smf ကို သိပ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ Admin panel က phpBB နဲ့ ယှဉ်ရင် သိပ်မခန့်သလိုပဲ။ phpBB နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ သုံးရတာ ပိုသုံးလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထဲက စာလုံးလေးတွေက သေးသေးလေးတွေ။ လုပ်ထားတာ ပြီးပြီးရော လုပ်ထားသလိုကြီး ဖြစ်နေတယ်။ phpBB လို Admin panel ကို ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးရင် တော်တော်ကောင်းမယ်ဗျာ...
Thank ခလုတ် လေး နဲ ့.. မြန်မာ လက်ကွက် ကိုလဲ ရှင်းပြပါအုံးခင်ဗျာ.
ကျွန်တော် လက်ရှိ ဖိုရမ် မှာ(SMF).. Thank ထဲ ့တာ ထဲ ့လို ့အဆင်မပြေလို ့..:39:
နောက် Ajax chat လဲ ထဲ ့ချင်ပါတယ်.. ဘယ်ဗားရှင်း ကောင်းလဲ ခင်ဗျာ
ကိုရဲမာန် ..Mod သွင်းတာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ ..ဒါပေမယ့် Board မှာပေါ်မလာဘူးဗျ ..အဲဒါနဲ့ သူ့ဆိုဒ်မှာ လိုက်ကြည့်တော့ သွားတွေ့တာလေး တစ်ခုရှိလို့ ထည့်လိုက်တာ ပေါ်လာတယ်ဗျ ..အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ..
ဒီအောက်က ကုဒ်လေးကို index.template.php မှာ သွားထည့်ပေးလိုက်မှ ပေါ်လာပါတယ် ...
ကိုရဲမာန်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...:):)
အကိုက ဘာဗား၇ှင်း သုံးတာလည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော်ညက စမ်းတုန်းက 1.6 နဲ့ စမ်းလိုက်တာပါ။ အဲဒီမှာတော့ ဘာမှ လုပ်ပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က အင်တာနက်ပေါ် တင်စမ်းတာ မဟုတ်တော့ နည်းနည်းလေးတော့ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း smf ကို သိပ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး။
အဟင့် အစောကြီးတည်းက စကား ပုလ္လင် ခံထားတာကို
ဖရီးဆိုဒ် တော်တော်များများမှာ Ajax Chat ကို သုံးလို့ မရတာများတယ်။ ရလည်း ခဏပါပဲ။
မြန်မာလက်ကွက်ကို ကိုစေတန်ကို မေးကြည့်ပါ။ သူက ပိုပြီး ကျွမ်းပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူများ ရေးထားတာတွေကို နည်းနည်း လူလည်ကျပြီး နည်းနည်း သုံးလို့တော့ ၇တယ်။ ခေါင်းတော့ နည်းနည်းစားမယ်ထင်တယ်။
thanks ခုလုတ်အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်် အရင်က smf စပြီး စမ်းသုံးတုန်းက တစ်ခါ စမ်းဖူးပါတယ်။ အခု ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
thanks ခုလုတ်အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်် အရင်က smf စပြီး စမ်းသုံးတုန်းက တစ်ခါ စမ်းဖူးပါတယ်။ အခု ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ :d
Ajax chat က ဖရီးဆိုက်စ် ဆိုတာ hosting ကို ပြောတာလား ..
Ajax ဖရီး ကို ပြောတာလား .အစ်ကို.. ကျွန်တော် စမ်းတာ local မှာ ရတယ်. hosting မှာ
ချိတ် ရင် ခုနလေး နဲ့ကျကျ သွားတယ် ခင်ဗျ..
ကျွန်တော် ့ဆိုက်စ် က လက်ရှိ hosting ကို ဘန်းခံထိထားတယ် ဗျ
www.myanmargalaxy.com က ကျွန်တော ့ဆိုက်စ် ပါ.. ကိုကြီး ရဲမာန် မြန်မြန် စမ်းနော်..
You can try this mod
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တာ် စကားပြော လိုသွားတာပါ။ free hosting ကို ပြောတာပါ။ ၀ယ်သုံးရင်တော့ ရပါလိမ့်မယ်။
SMF နဲ့ ပတ်သတ်တာလေးတွေကို ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါလား။ အဲဒါမှာဆို တော်တော် အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။
ကျွန်တော် က ၀ယ်သုံးတာ ခင်ဗျ.
မလုပ်တတ်လို ့နေမယ် Chat က ရ ကို မရဘူး..
Ajax ကို ပါ ၀ယ်သုံးရတော ့မယ် ထင်တယ်..:O
ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ..
ကျွန်တော် SMF 1.1.8 ကို သုံးပါတယ် ကိုရဲမာန် .. အခု အားလုံးတော့ အဆင်ပြေသွားတယ် ..ဒါပေမယ့် ပြဿနာလေး တစ်ခုတွေ့တယ်ဗျ ..:P:P ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကတော့ အောက်က ပုံကအတိုင်းပါပဲ....
ကျန်တဲ့ Sign တွေက သူ့သင်္ကေတနဲ့ သူမှန်နေပေမယ့် .. Sound & Smiles & Color တွေက မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ ..ဘယ်နေရာမှာ သွားပြင်ရမလဲ မသိဘူး..:77::77::77:
ကျန်တဲ့ Sign တွေက သူ့သင်္ကေတနဲ့ သူမှန်နေပေမယ့် .. Sound & Smiles & Color တွေက မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ ..ဘယ်နေရာမှာ သွားပြင်ရမလဲ မသိဘူး..
ကျွန်တော် စိတ်ထင် ပြောကြည့်မယ်နော်....
အကိုက install လုပ်တုန်းက လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပါမစ်ရှင်း အပြည့် (777) မပေးထားလို့ ဖြစ်မည်ထင်တယ်။
အဲဒီနေရာမှာ ဆိုင်ရာ ပုံလေးတွေ ပြန်ဖြည့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း smf ကို သိပ်ပြီး သုံးဖူးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထင်တာလေး ပြောကြည့်တာပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သူ့လမ်းကြောင်းအလိုက် လိုအပ်တဲ့ ပါမစ်ရှင်းလေးတွေပေးပြီး ဖြုတ်ပြီး ပြန်ရမ်းလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
Ajax ကို ပါ ၀ယ်သုံးရတော ့မယ် ထင်တယ်..
ဒါဆိုရင်တော့ အကို့ hosting က ဖြစ်တာပါ။ သူတို့ဆိုဒ်က လက်မခံတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
subdomain နဲ့ မဟုတ်ပဲ နောက်တစ်ခုနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေရင် ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါမှ မရဘူးဆိုရင်တော့ အကို့ host က ဖြစ်တာပါ။
ဘာလို့လဲ လုပ်ပြီးပြီးချင်း အကိုခဏ သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ အကို့ အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒိုးမိန်းက လက်မခံတဲ့ သဘောမျိုးပါ။
ကျွန်တော် အစ်ကို ဆွေးနွေး တဲ ့
အဲတာ ကို ဖိုရမ် မှာ အင်စတော လုပ်တာ ရတယ်..
အက်ဒမင် တစ်ယောက်ဘဲ ချက် လို ့ရနေလို ့.. ကျွန်တော် က portal အသုံးပြုပါတယ်..
portal မသုံးတဲ ့အခြား ဖိုရမ် မှာ တော့အဆင်ကိို ချောလို ့ဗျာ.. :77:
အဲဖိုင်လေး က အယ်ရာ တတ်တယ် ထင်တယ် ..ကူညီကျပါအုံး ဂျာ..
3. Execute Modification ./Sources/ManagePermissions.php Test failed
အဲဒီ မှာတော့အဖြေ တွေ တွေ ့တယ်.. တိုင်ပတ် နေတုံး.. :d
အဲဒါများ ဖြုတ်ပြီး သေချာ ပြန်အင်စေ၇ာ လုပ်လိုက်ပေါ့...... :d
ကျွန်တော် က ကိုရဲမာန် ၈ျီး ကို အားကိုးတာ.. :P
ဖြုတ်ပြီး ပြင်တင်တယ်.. subs.php တို့mangepermissions.php တို ့ကိုလဲ
ပြန်ပြင်တယ် မူရင်း page မှာ error တွေ တတ်ကုန်ရော.. :106:
ဒီလို လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား။ portal က MK portal ထင်တယ်။ တင်ထားတဲ့ portal ကို ဖြုတ်။ ပြီးရင် phpmyadmin ထဲကနေ portal နဲ့ဆိုင်တဲ့ database တွေပါ ပြန်ဖြုတ်။ ပြီးမှ shout box ထည့်။ ပါမစ်ရှင်းကတော့ စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေါ့။ ပြီးမှ portal တင်....
အဲဒါမျိုး လုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ portal ကို နောက်မှ တင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ- ajax chat တို့ ဘာတို့ တင်ချင်ရင်တော့ ဘာမှ database တွဲစရာမလိုတော့ဘူး။ ဖိုရမ်လုပ်။ ajax chat လုပ်။ အပေါ်ကနေ portal တင်လိုက်ရင် အားလုံးကို ချိတ်မိသွားရော... ajax chat ကို ၀င်ရင် ဘာမှ ပတ်ေ၀ါ့ရိုက်ပြီး ၀င်စရာတောင် မလိုတော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးပါ...
ကူညီတာက ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုက ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲကာလမို့လို့....